Dowlada oo dooneysa in soo galootiga ay shaqo tagaan | Somaliska
Dowlada oo dooneysa in soo galootiga ay shaqo tagaan
Isbuucaan waxaa kulan sadexgeesood ah isugu yimid wasiirka Socdaalka Tobias Billström, Wasiirka isdhexgalka Erik Ullenhag iyo Wasiirka Shaqada Hillevi Engström iyagoo ka wadahadlay sidii soo galootiga suuqa shaqada loo gelin lahaa.
Wasiirada ayaa ku dhawaaqay in dowlada ay sii laba jibaareyso sidii loo yareyn lahaa shaqo la,aanta haysata dadka soo galootiga ah. Wasiirada Shaqada Hillevi Engström ayaa sheegtay in Sweden aysan ka bixi karin in dad badan ay suuqa shaqada banaanka ka joogaan.
Waxyaabaha la doonaya in xooga la saaro ayaa waxaa ka mid ah horumarinta waxbarashada sida SFIga iyo yareynta canshuuraha. Balse wasiirada ayaan ku dhawaaqin waqti la rajeynayo natiijo.
Shaqo la,aanta soo galootiga ayaa 11% ka badan kuwa soo galootiga ah. Soomaalida ayaa la dhihi karaa waa bulshada ay haysato shaqo la,aanta ugu badan Sweden.
Sweden weligeedba shaqa la,aanta kaalinta 1aad ayey kaga jirtey marka loo fiiriyi wadamada barwaaqa sooranka ,, Sweden waxaa caado u ah in dad ka ku dhaqan shaqa la,aanta heysato oo la dhihi karo 28% iney ku naas nuujiso lacagta canshuuraha ka soo baxa ,, taas oo dadka ka dhigey kuwa maskaxdooda gabtey noloshoodana ku kooban tey guriga iyo iney la cayaraan inta ay guriga joogaan caruurtooda iyo xaasaskooda.
asc jimcaale sxb waa muuse oolacag hadii laguu soo diro ilaa imisa maalmood ayay kugu soo gaartaa .maxaa yeelay maalinta aan lacagta kuusoo diray ilaa maanta waxaa lajoogaa hal week.telkeygana waxaa kuugu soodiray imelka somaliska.com .marka aniga waxba garanmaayo sxb .mahadsanid
Muuse lacagtaadii mar hore ayay na soo gaartay, sms xaqiijin ah waan kuu soo diray. Waxaa laga yaabaa in telka aad noo soo qortay uu qaldanyahay. Fadlan telkaaga email ku soo dir markale info@somaliska.com. Mida kale, arimaha ku saabsan Qaybta Xubnaha waxaa haboon in aad email nagula soo xiriirtaan intii aad halkaan ku qori lahayd.
June 2, 2011 at 10:49
waxaan la yaabanahay reply ga loogu talagalay qoraalka webka maxay tahay oo lagu xisaab tamahaayo waxaan helahay ninka wata Muuse sxb ha ku dheelin shaqada Webka jimcale adiga xataa waa ka daba gashay waayo waa u jawaabtay marka waa qalad taas waa in aad si kale u xalisaa bro anagu hadii aan nahay aqristayaasha webka somaliska waa ka xunahay messagen
Ceyrtaan oo aan la yarayn/ la joojin wax kala hagaagaa malahan ? says:
Runtii waxaan qabaa dadka haddii ceyrta lagu dhibo laguna adkeeyo in ay waxbarashada ku dadaali lahaayeen , hadda sheekadu odayaasha sooba dhaaftay oo dhalintii ayaaba ku fekerayn shaqo uun Ceyr ku Tashi noqday , markaa ayay iyagoo isla fiican surwaalada dabada ka riteen .
Abdi hassan Magacaaga... says:
Asw aniga waxeey ila tahay in eey iska aado south afrika ofki dhibsada certa marka kale cerTA wAxaad mood in eey tahay wanag ee waxAa lagu iibsada carirtina
June 2, 2011 at 10:59
haye lacag maa u baahantahay jimcaalow
asc walaahi waa illaahey mahadiis hadeeyba noo ogolaanayaan shaqo ,walaalhi aniga waxaan kula talin lahaa soomalida oo dhan in ay shaqeystaan galina ay waxbartaan taas ayaa anfaceysa ayagana noloshooda dalkooda hadhoowdi wax u qabaneysa illaah ha nooga soo qaado ayaan dhihi lahaa
saxib wa sheko wanagsan wan ubahanahay shaqo
wanad ku mahad san tahay war bixintada jimcale bra
June 6, 2011 at 16:42
waa war aad u wanaagsan hadii lagag dhabaye warkan maanta lasoo qoray
June 11, 2011 at 17:11
Aniga waxay ila tahay nimanka 24 hours dhex jiifa maqaaxida ina shaqo lo diro si ay reerahooda oo biishadan.Nin kasta inu reerkisa kfaalo qaado waye oo caruurtisa tusaale o noqdo.Caruurtu waalidka ayey ku daydaan, hadi aabihiila iyo 12ka duhurnimu o hurdo marka bacdi maqaaxi so dhex fariistu ma ubadki ba hagaagiy?